သူမကို အသုံးချပီး အောက်ဆီဂျင်ဝယ်လို့ ရတယ်ဆိုကာ ငွေတွေ လိမ်ဖို့ကြိုးစားသူကို သက်သေများအား ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့ ချပြလာတဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် – Shwe Likes
G Shwe | July 19, 2021 | Celebrity | No Comments
လတ် တလောအြေ ခအေ နမှာ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လ ပ်မှုတွေေ ကြာင့် ရောဂါေ ဝဒနာခံစားနေ ရတဲ့ ပြည်သူတွေ အတော်ေ လးကို သော ကတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဆီဂျင် အိုးလိုအ ပ်နေကြသူ များက ပုံမှန်ဈေးထက် ငွေကြေးေြ မာက်မြားအ ကုန်အကျခံကာ ရှာဖွေ ဝယ်ယူနေမှုေ တွကြောင့် မသ မာသူတွေ တစ်ချို့က ငွေတွေ လိမ်လည်သွား ကြတာကို လည်း စိတ်မကောင်းစွာ မြင်ေ တွ့နေရပါတယ်။
မနေ့ညက သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင်မြင့် မိုရ်ရဲ့လူမှုကွန်ယ က်တွင် အောက်ဆီဂျ င်ဝယ်လို့ ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်လည် သွားသူနဲ့ ပြောထားခဲ့တဲ့ သက်သေများ အား ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့ ချပြလာခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဆီဂျင် အိုးတွေကို ဝယ်ယူ လှူဒါန်းလို့ ရတယ်ဆိုပြီး ထို လူလိ မ်မှ နှိုင်းရှင်ထံသို့ လာရောက်ဆက် သွယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမ အကောင့်နဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် ငွေေ တွကြိုမလွှဲေ ပးဖို့ ပစ္စည်းေ ရာက် ငွေချေစနစ် စရံကြိုေ ပးစရာ မလိုပါလို့ Facebook တွင် ပို့စ်တင်ပြီး ရေးသားေ ပးခဲ့ပါတ ယ်။
နှိုင်းရှင် ကိုယ်တိုင် အော်ဒါ တင်ပေးသူတွေ တစ်ယောက်မှ ပိုက်ဆံကြို မလွှဲလိုက်ကြတာေ ကြာင့် ကံကော င်းသွား ခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်း ရောက်မှေ ငွချေဖို့ကိုလည်း နှိုင်းရှင်ရဲ့ post တွင် ထည့်ရေးေ ပးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက် ကျတော့ သူမအ သိတွေဆီ အိုးတစ်ေ ယာက်ဆီကိုမှ မရောက်ဘဲ အော်ဒါ အသစ် သူ့ဆီတိုက်ရို က်သွားတဲ့ လူတွေဆီကိုေ တာ့ ငွေတွေကြိုလွှဲခိုင်းခဲ့ ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က လာပြောတဲ့အ တွက် တစ်ချို့ လူတွေရဲ့ေ ငွတွေကို အချိန်မှီ ပြန်လွှဲခိုင်းတာ ပြန် လွှဲပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
လူတွေအားလုံး အခုလို ဆင်းရဲဒုက္ခရော က်နေချိန်မှာ ငွေတွေ လိမ်လည် သွားသူကို ကျိန်စာမတိုက်ဘဲ မေတ္တာပို့ပေးနေေြ ကာင်းကို လည်း အခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ကဲ မထင်မှတ်ေ လာက်တဲ့ မိန်းမဆန်ဆန် အသံေ သးသေးလေး နဲ့ အသံ ပိုင်ရှင်ညီမလေး ကျိန်စာလည်းမ တိုက်ဘူးဆုလည်းမေ တာင်းပေးပါဘူး ငါ့ညီမ လိမ်လို့ရသေ လာက် လိမ်သွား ခဲ့ပြီ….လူတွေ အားလုံးရဲ့ အသက် သောကမျက် ရည်တွေ ငါ့ညီမ ဆီ အကြွေး ဆပ်လိုကိကြပြီ။
ဒီဘဝ ‌အစ်မတို့ဆပ်လိုက်ကြတဲ့ အကြွေးေ ဟာင်းကိုယူပြီး ဒီဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စွာ မြိန်ယှ က်စွာ စားသုံးပါနော်😏နောင်ဘဝ အတွက် လည်း ကြွေးသစ် ယူသွားပါ ညီမရေေ တာ်တော်ကြော က်ဖို့ကောင်းပြီး လူတွေ ဒုက္ခအကြီးအ ကျယ်ရောက်ေ နချိန်မှာ လိမ်ရဲတဲ့ စိတိဓာတ်ကိုတော့ အရမ်းအံ့ ဩမိတယ်…
ဘယ်လို စိတ်မျိုး နှလုံးသား မျိုးနဲ့များ လူဖစ်လာသလဲ ညီမရေ…ထားလိုက်ပါ ဒီဘဝမှာ ညီမအေး ချမ်းပါစေ…ဒီဘဝမှာ ညီမပျော်ရွှင်ပါစေ…ဒီဘဝမှာ ညီမ ဒီရောဂါကြီးကကင်းပြီး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ပါစေ ညီမရေ ….အစ်မတို့မေတ္တာပို့နေပါပြီ….ငါ့ညီမကို🙏🙏🙏
ကျွန်မရဲ့ အားနာ တဲ့စိတ် သနားတဲ့စိတ် လူတွေကို ကူညီလွန်းအား ကြီးတဲ့စိတ် လှူချင်ပေးကမ်း ချင်တဲ့စိတ်တွေ ကိုခုတုံး လုပ်သွားတာ ပါ…ကိုယ်စောင့် နတ်ကတော့အမြဲသ တိေ ပးနေတယ်…ညက တင်ရမလို မတင်ရမလိုနဲ့ ဇဝေဇဝါဖစ်နေတယ်….
ဪ ငါတင်ပေး လိုက်ရင် လူတွေ ဈေးသက်သ က်သာသာနဲ့ ရသွားမယ်…ရောင်းပြီးသွားရင် မဝယ်နိုင်တဲ့ သူတွေကို ထပ်လှူေ ပးမယ် ဆိုတော့ ကိုယ်မလှူနိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ငါကူညီ ပေးရာရော က်ပါတယ်ဆိုပြီး တင်ပေးလိုက် မိတယ်…
ဘာအခကြေးငွေမှ မယူပါဘဲ…..ဒါပေမယ့် ငွေကြို မလွှဲဖို့ စရံ မလွှဲဖို့ ကျွန်မအ ထပ်ထပ် ရေးထား ခဲ့ပါတယ်.။ တချို့တွေ အရမ်း လိုအပ်နေ တဲ့သူေ တွရဲ့ စိတ်တွေကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်မသိေ အာင် ငွေတွေကြိုေ တာင်းနေတ ယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ လာပေးြ ကတော့ နေ့လည်ထဲက ရင်တမမနဲ့ ငါ့ကို ဘယ်အချိန် Block မလဲလို့စော င့်ေ နတာပါ…. 😏😏😏
အိုကေညီမလေး သံသ ရာမှာ ပြန်တွေ့ကြတာေ ပါ့🙏🙏🙏 သူ့အကော င့်ထဲမှာတော့ ဒီကောင် မလေးပုံတင်ထားတာ တွေ့ပါတယ် သူများပုံယူသုံး ထားလား သူ့ပုံအစစ်လားေ တာ့ မသိပါဘူး ” ဆိုပြီး အလိမ် ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအား သေချာ ရှင်းပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကာလမှာ လူတွေ ဒုက္ခရောက်ေ နတာကို အခွင့်ကော င်းယူပြီး လိမ်လည်နေကြသူတွေ များစွာ ရှိနေကြပါတယ်။ စိတ်ချယုံကြည် လို့ရသူတွေထံ မှသာ အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေ ဝယ်ယူကြပါရန်နဲ့ လိမ်လည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခမှ ကင်းဝေးြ ကပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
သူမ ကို ဖမ်းမိပြီရင် မတော်မတရားပြု ကျင့်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာတွေ ပို့တာကို ခံနေရ တဲ့သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ